Nidina an-dalambe ny mponin’Andohan’i Mandroseza : «Amboary ny lalana fa aza ravana ny tranonay» | NewsMada
Nidina an-dalambe ny mponin’Andohan’i Mandroseza : «Amboary ny lalana fa aza ravana ny tranonay»
Tsy ny eny Ivato ihany. Nidina an-dalambe nilanja sora-baventy koa ireo mponina eny Andohan’i Mandroseza, omaly. Tsy eken’izy ireo ny handravana ny tranony noho ny fanamboaran-dalana atao eny an-toerana. Nitondra fanazavana sy nampitony azy ireo ny delegen’ny boriborintany eny an-toerana.
Mafampana indray ny eny Andohan’i Mandroseza. « Ilaina ny hanamboarana ny lalana nefa tsy ekenay kosa ny handravana ny tranonay… Efa nohajarinay an-taony maro ny toerana ka tsy hiala izahay na inona na inona... », hoy ireo mponina, niaraka amin’ny sora-baventy.
Tsy niandry ela fa nitondra fanazavana avy hatrany, momba ity raharaha ity, ny delegen’ny boriborintany eny an-toerana, Razafindraibe Jacques, omaly, ary niezaka nampitony ny mponina. « Tsy mbola tonga eto amiko ny drafitra fanajariana momba izany fanamboaran-dalana izany. Andrasana ny fiaraha-miasa momba izany satria tsy mahalala momba io izahay. Tsy mbola nisy ny fivoriana, tokony hiarahana manao. Amiko, tsy mbola misy aloha izany. Aleo miandry am-pilaminana isika mponina. Rehefa mazava izany sy ny drafitra rehetra vao hojerena ny fomba hifandaminana», hoy izy.
Tsiahivina fa efa niteraka fitokonan’ireo kaoperativa mpitatitra mihazo an’Ambohipo iny ny haratsian’ny lalana, ny 1 avrily teo, nitakian’izy ireo ny hijeren’ny fanjakana sy ny kaominina akaiky izany. Efa an-taony ny fampanantenana ny hanaovana azy io, saingy tsy nisy nanao izany. Nahatonga ny hetsiky ny mpitatitra.
Voatsikera ny minisitry ny Asa Vaventy
Nidina teny an-toerana ny iraky avy amin’ny minisi-panjakana misahana ny Fanajariana ny tany taorian’izany ary nanambara fa hamboarina avy hatrany ny lalana. Efa natsidik’izy ireo anefa fa anisan’ny mahatonga ny fahasimban’ny lalana ny fanorenana tsy ara-dalàna amin’iny faritra iny ka mahatonga ny fiangonan’ny rano, manafaingana ny fahapotehan’ny lalana. « Tompon’andraikitra voalohany momba ny fanomezan-dalana hanorenana trano ny kaominina. Tsy maintsy hisy koa anefa ny fandravana fotodrafitrasa mba hivarinan’ny rano, tsy hiangona eo amin’ny lalana… », hoy izy ireo.
Niditra an-tsehatra avy hatrany nandravona ireo lavadavaka ny mpanamboatra lalana, ny ampitson’io.
Anisan’ny nahatonga ny filoha Rajaonarimampianina, nively kibay an-kolaka ny minisitry ny Asa vaventy ho tsy nahavita ny andraikiny ny raharaha taorian’izany na efa nanome toromarika aza ny tenany ny amin’ny tokony hanamboarana izany.
Manomboka eo amin’ny klinika Ambatoroka Ambany ka hatreny an-tampon-tanàna izany lalana izany ka ratsy sy potika tanteraka ny 300 m mahery eo.
Tsy manaraka ny fenitry ny fanajariana ny tanàna
Manoloana ireo, tompon’andraikitra voalohany amin’izany ny mpitantana teo aloha eo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra (CUA), amin’ny nanomezany alalana ny fanorenan-trano, tsy manara-dalàna. Tsy nanaraka ny fenitry ny fanajariana ny tanàna izany. Efa anisan’ny fandaharanasan’ny CUA am-perinasa ny hijery ny fanorenana trano ambony lakandrano… Efa eo am-panisana izany izy ireo amin’izao fotoana izao. Anisany ny eny amin’iny faritra iny ?
Hiverimberina koa anefa ny fahasimban’ny lalana raha tsy ahitam-bahaolana izao, amin’ny hivarinan’ny rano…
Ho tonga hatraiza indray ity raharaha ity, ankoatra ny hetsiky ny mponina eny Ivato, amin’ny fanamboaran-dalana handraisana ny Frankofonia ?